Okusanda, abashayeli wathola imoto Honda Fit. Izibuyekezo lokhu imoto encane kanye nama-practical kuthiwa ozilindele kunoma yimuphi umgwaqo. Ake sizame ukuqinisekisa lokhu ngokwakho, kulapho ukuthi ayikahlanganiswa ukubona yena kanye awawazisanga, ngokucacile asinakusho lutho.
Imoto polutoralitrovye ifakwe ezine-cylinder, ogama amandla 109 hp It uyakwazi ukuba ukhule ufike amakhilomitha 100 ngehora e 11.4 imizuzwana. I automatic transmission ifakwe ngesivinini ayisihlanu, kakhulu ngokushelela enikeziwe amandla amasondo, okwenza upshifts futhi downshifts. Uma ushintsha kwimodi bhukwana lungasetshenziswa ukudluliswa yesithathu kuphela, okuyinto eqinisweni ibonakala engenamsebenzi. Okokhelekayo imoto kancane isimanga, banikezwe ivolumu yenjini - 8.7 amalitha 100 kuleli dolobha futhi 6.9 amalitha emgwaqeni omkhulu. Ukuhambisa kwimodi okuxubile, umshayeli kuyodingeka bagcwalise 7.8 amalitha ngamunye amakhilomitha angu-100.
Ngokuvamile, akufanele wathutha ngesivinini, adalwe Honda Fit. Izibuyekezo kufakazela ukuthi lobubhalo lakhe ezingeni ehloniphekile. Mayelana nokumiswa, kungase kubonakale ekuqaleni ukuthi kwayena umamkhulu tugovat, kodwa ke ukujwayela futhi uqala ukuhlola ukunemba cornering ekahle, kuhambisana kakhulu ayo.
Imoto lakhelwe bantfu ngekulunga ubude. Kuyinto inani onjiniyela abaye anquma ukwenza ophahleni ephakeme. Kodwa zikhona nemiphumela ethile engathandeki. Izihlalo engela kwesokudla akulula ukuba wonke umuntu emuva uyakhathala pretty masinyane. Ngakho-ke, uhambo ku akusiyo efiselekayo ukuya. Ngo ezingemuva ihlalisa eningi isikhala ngenxa yokuthi uphethiloli ihanjiswe phambi kwesihlalo imoto ngaphansi Skirmish.
Car Automation abampofu. Uma abanye abakhiqizi ozama ukushintsha zonke izinqubo, Abenzi imoto emuva esikhathini esidlule. Kodwa, naphezu kwalokhu, izilawuli ilula kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa.
Asikhulume mayelana nomklamo, umhlobiso futhi kokuqeda Honda Fit. Izibuyekezo yalezi izingxenye imoto zinhle. Abaningi bathi izihlalo emuva original kakhulu. I okwakhe lokhu kube ngcono. Chair emuva izihlalo amenable ukuba ukulungiswa ngomunye ohlangothini isigwedlo. Ungase futhi sithathe futhi isihlalo ezihlalweni.
izinto kokuqeda ukunikeza ukuthi imoto isabelomali. Lokhu awasebenzi kuphela indwangu, kodwa cishe yonke into ngaphakathi Honda Fit. Impendulo izinga izinto akuyona okungcono. abanikazi abaningi bathi yonke impahla eyenziwe ngepulasitiki kanzima, kodwa akumnandi ikakhulukazi. Ngokuphathelene esihlalweni somshayeli, nakho konke ohlobene lokhu, onjiniyela baye bazama lapha ongahaheli, zonke ekhishwe ngesitayela classical eyodwa nangezinto zokwakha izinga. Kodwa ngaphandle kwemoto kubukeka okuyisidina. Akekho ukuthi kungagcizelela ubuntu bayo.
Le moto ephelele indoda nomndeni. He is esisebenzayo, petrol kuyinto ongaphakeme, indawo emotweni ngokwanele, nokuphathwa akulona embi kakhulu. Yini Kuhle kokusho kule ndaba, ngoba umthamo high Honda Fit Aria. Izibuyekezo luye lwabonisa ukuthi le nkomba kungaba zincintisane ne Suv. Ngakho, abantu abafuna SUV compact ungayeka bagxila kule moto. Kodwa ungakhohlwa ukuthi umuzi nemoto, hhayi kakhulu efanelekayo travel, kanye induduzo ikakhulu akuyona.
Izinzuzo esemqoka Honda Fit Ukucaciswa ayikwazi oluthathwa, kodwa lesi sigaba imoto yonke efanayo, ungaphawula a umfutho omuhle endleleni, a Ukusebenziseka kahle eliphezulu nokusebenza. I yokuntula ngokushesha attribute ngumuntu okwaziyo ngqo kubo bonke abagibeli gumbi, injini umsindo kakhulu futhi Yiqiniso, value kuqhathaniswa eliphezulu imoto ku isizinda izimbangi main.
Ifomu lokufisa amaqanda: pheka kahle